पोषक दानाको गुणस्तरमा प्रतिबद्ध छौं | गृहपृष्ठ
Home प्रडक्ट पोषक दानाको गुणस्तरमा प्रतिबद्ध छौं
प्रडक्ट 87 views
प्रदीप रुङ्टा प्रबन्ध निर्देशक, ॐ चावो बिरो फिड इण्डष्ट्रिज प्रालि
ॐ चावो बिरोफिड इण्डष्ट्रिज २०६५ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । उक्त कम्पनीले पक्षीका लागि ‘पोषक पेलेट दाना’ ब्राण्डको स्तरीय दाना उत्पादन गर्दै आएको छ । यो उद्योग सञ्चालनमा आएको छोटो समयमै आफ्नो गुणस्तरीय सेवा र उत्पादनले गर्दा कुखुरापालक कृषकमाझ स्थापित बन्न पुगेको छ । कुखुरापालन व्यवसायको क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधि भिœयाएर व्यवसायलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन सफल कम्पनीको नेपालभर बजार र प्राविधिक सञ्जाल छ । कृषक वर्गको सहयोगका लागि अनुभवी विशेषज्ञहरूको समूह रहेको यस कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप रुङ्टासँग ‘नेपाल एग्री टेक २०१८’, पशुपालन उद्योगको व्यावसायिक अवस्था र भावी योजनाका बारेमा आर्थिक अभियानका मदन लामिछानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित सार :
नेपालमा दाना उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो समय नेपालमा धेरै दाना उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । १० वर्षअघि हामीले उद्योग स्थापना गर्दा प्यालेट दाना उत्पादक चार–पाँचओटा उद्योग थिए । अहिले यस्ता उद्योग ५० ओटा छन् । दाना उद्योग स्थापना हुने क्रम बढेको छ । यसले उत्पादन पनि बढ्छ । किसानले उत्पादन लागत नपाउने समस्या आउन सक्छ । पशुपक्षीपालनका लागि यो उद्योग एकदमै महŒवपूर्ण हुन्छ । पोल्ट्री सबैभन्दा विकसित सेक्टर पनि हो । यो व्यवसाय सानो पूँजीबाट पनि गर्न सकिन्छ । यसमा लगानी गरेको ३६ दिनबाटै मुनाफा कमाउन सकिन्छ । यो आयआर्जनका हिसाबले छिट्टै र थोरै लगानीमा कृषकलाई धेरै मुनाफा दिने व्यवसाय पनि हो । यो व्यवसायमा पूरै समय खट्नु नपर्ने भएकोले धेरैले यसलाई ‘साइड बिजनेश’का रूपमा पनि गर्दै आएका छन् । योसँगै अन्य कुनै व्यवसाय गर्न सकिन्छ । थोरै समय र लगानीमा धेरै मुनाफा दिने व्यवसाय भएकोले पनि यो उद्योगको भविष्य उज्ज्वल छ ।
कम्पनीका उत्पादनबारे जानकारी दिनुहोस् ?
२०६५ साउन १ गतेदेखि कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा दाना उत्पादन शुरू गरेको हो । हाम्रो उद्योगले अहिले कुखुराका दाना उत्पादन गर्छ । यसैगरी गाई र बङ्गुरका दाना उत्पादन पनि गर्दै आएका छौं । नेपालको यस क्षेत्रमा हाम्रो कम्पनीको बजार हिस्सा ३० प्रतिशत छ । हामी डिलरमार्फत उत्पादन विक्री गर्दै आएका छौं । १ सय ५० डीलर छन् । ती डिलरका पनि सब–डिलर छन् । बर्डफ्लु जस्ता समस्या आएमा सरकारले दिनेजस्तै अनुदान हामी दिन्छौं ।
कम्पनीका विशेषता के हुन् ?
हामी आफ्ना सबै उत्पादन (दाना)को गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिन्छौं । गुणस्तरप्रति प्रतिबद्ध रहनु नै कम्पनीको मुख्य विशेषता हो । हामीले यसैलाई केन्द्रित गरेर काम अघि बढाएका छौं । किसानलाई फाइदा होस् भन्ने कम्पनीको ध्येय हो । गुणस्तरीय उत्पादनकै कारण हामी एफसीआरमा बढी केन्द्रित भएका छौं । एफसीआर भनेको कम दाना खुवाएरै उत्पादन बढी हुनु हो । त्यस हिसाबले हाम्रा काम भएका छन् । हामीले अहिले १ दशमलव ६५ को एफसीआर दाबी गरेका छौं । यो भनेको ३ केजी २ सय ग्राम दाना खुवाएर २ केजी उत्पादन गर्नु हो । त्यसमा अझै सुधार गर्दै छौं । एफसीआरले किसानको लागत घटाउँछ । यसरी उत्पादन गर्दा समय पनि कम लाग्छ ।
दाना किन्ने कुखरापालक व्यवसायीलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
दानाको विक्रीवितरण विभिन्न डिलरबाट हुँदै आएको छ । खासगरी हामी किसानसँग केन्द्रित भएकोले किसान तथा व्यवसायीले आफ्नो एफसीआर हेर्नुपर्छ । कति दाना खुवाएर कति उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा किसान जानकार हुनुपर्छ । तर, यस प्रकारको सचेतना सबै किसानलाई छैन । विस्तारै यसबारे जानकारी बढ्दै गएको भने छ । व्यावसायिक किसानले एफसीआर त हेर्नैपर्छ । यसमा जानकार हुनेहरू पोषक दाना खरीद गरिरहेका छन् ।
दाना उद्योगले भोगेका समस्या के के हुन् ?
भारतबाट तयारी दाना आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ । सरकारले अधिकांश कच्चापदार्थमा सहुलियत दिएको छ । तर, कुनै कुनैमा ५ देखि २५–३० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाएको छ । यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन केही महँगो पर्छ । त्यस कारण अलिअलि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पनि छ । भारतीय उत्पादनसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं । यसमा पनि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
स्वदेशी पशुपक्षीमूलक उद्योग र यो व्यवसायको प्रवद्र्धनमा सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?
मानिसलाई आवश्यक पर्ने प्रोटिनको स्रोत पशुपक्षीजन्य उत्पादन हो । तरकारीबाट एकदम कम प्रोटिन पाइन्छ । त्यसैले, पशुपक्षीजन्य उत्पादनको प्रचारप्रसारमा सहयोग गर्नुपर्छ । साथै, सरकारले किसानलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । कच्चापदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार पनि कम गर्नुपर्छ । गैरकानूनी रूपमा मासु आयात हुँदै आएको छ । यसलाई रोक्न काम अघि बढाउनुपर्छ । यस्तै, पशुबीमाको व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा बाहिरबाट मासुलगायत पशुजन्य वस्तु आयात भएको अवस्था छ । यहाँको व्यवसायमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?
खासगरी मासुलगायत तयारी वस्तु भारतबाट पैठारी हुने गरेको छ । भारत र नेपालको लागत मूल्य निकै फरक हुन्छ । नेपालमा किसानले १ सय ५० देखि १ सय ७० रुपैयाँसम्ममा विक्री गर्दा पनि घाटा भइरहेको हुन्छ । भारतमा ७० देखि ८० भारतीय रुपैयाँमा विक्री गर्दा पनि फाइदा हुने अवस्था छ । उनीहरूको उत्पादन समूहमा हुने गरेको छ । त्यस कारण पनि सस्तो छ । त्यहाँको लागतसमेत कम हुन्छ । यस्तै, भारतबाट खसीबोकालगायत मासु प्रयोजनका पशुको आयात पनि हुने गर्छ । सरकारले यसलाई रोक्नुपर्छ । यसले नेपालमा उत्पादित पशुजन्य वस्तु नेपालमै खपत हुने वातावरण बन्छ ।
हाल नेपालको कृषि र पशुपालनको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो समय यी क्षेत्रको विकास सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । पशुपालनमा पनि कुखुरा व्यवसायको वृद्धि वार्षिक १० प्रतिशत छ । नेपालको पर क्यापिटा इन्कम बढिरहेको छ । यसले गर्दा पनि माग उच्च हुँदै गएको छ । दानाका लागि आवश्यक पर्ने मकै मात्र नेपालमा छ । त्यो पनि मागको २० प्रतिशत मात्र उपलब्ध छ । भटमासको ढुटोलगायत अन्य पदार्थ आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अहिले भइरहेको कृषि प्रदर्शनीले नेपालको कृषि व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
नेपालमा दोस्रोपटक आयोजना भएको ‘नेपाल एग्री टेक २०१८’ बाट किसान तथा व्यवसायी दुवैले फाइदा लिन पाउनेछन् । यस्ता मेलाले विशेषगरी हरेक क्षेत्रमा भइरहेको विकासबारे जानकारी दिन्छ । साथै, उपभोक्ता र उत्पादकलाई एकै ठाउँमा भेला हुने अवसर प्रदान गर्छ । यसले उपभोक्ताले बजारमा आएका नयाँ–नयाँ प्रविधिका बारेमा जान्ने र उत्पादकले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धनका अवसर पाउँछन् । कृषिमा उपकरणको प्रयोग गर्न चाहनेका लागि यो एउटा राम्रो ‘प्लेट फर्म’ बन्न सक्छ ।
कम्पनीका योजना के के छन् ?
हामी विराटनगर र वीरगञ्जबाट दाना उत्पादन गरिरहेका छौं । वीरगञ्जमा रहेको कम्पनीको क्षमता ४ सय टन पुगेको छ भने विराटनगरमा २ सय टन छ । योसँगै १ महीनाभित्र विराटनगरमा ४ सय टनको उद्योग स्थापना गर्ने तयारी छ । यहाँ त्यति राम्रो चल्ला पाइएको छैन । त्यसका लागि राम्रो ह्याचरी उद्योग पनि स्थापना गर्दै छौं । ह्याचरी उत्पादन अर्काे वर्षदेखि हुन्छ । यसबाट गुणस्तरीय चल्ला उत्पादन हुने अपेक्षा छ । हामीले स्थापना गर्न लागेको ह्याचरीको प्रविधि अहिलेसम्म नेपालमै छैन । त्यसैले, चल्लाको गुणस्तर अरूको भन्दा राम्रो हुनेछ ।